Fingerprint Time Attendance - BaganMart
အကောင်းဆုံး အရည်အသွေးနှင့် Washing Machines
Frequency inverter NZ2000 series
AQUAMAP 80xs အဏ္ဏဝါရေဒါ GPS
ကွညျ့ရှု့သူ အရအေတှကျ : 648 view counts
စြေးနူနျး : 240 $ per Piece(s)
Brand : OLYMPIA
Model : TP-2302
Type : Finger scan
Common use : Office Accessories
Operation Mode : Offline
Authentication : Fingerprint + Pin
Fingerprint Sensor Area : 16mm x 14mm
Fingerprint Recognition Speed : About 1.2 sec
Max ID Records : 1000
Max. Management Records : 10, 000
Max. Attendance Records : 100, 000
Color Display : 320×240 dpi
Display language : English/Thai
Fingerprint Update : Smart Auto Update
Time Bell : 12 units (Internal and External)
Backup Battery : About 4hours of minimal Operation
Data Communication : USB Cable, SD Card , TCP/IP
Optional : Door Access, EM Card, RFID
Terms and Conditions : Cash on Delivery
Lead Time : 2Days
Germany နိုင်ငံထုတ် Olympia အမှတ်တံဆိပ် Fingerprint Time Attendance သည် ရုံးတွင်ဖြစ်စေ စက်ရုံများတွင်ဖြစ်စေ အသုံးပြုနိုင်သော စက်ဖြစ်ပါသည်။ တိကျမှန်ကန်သောလက်ဗွေများကို အများဆုံး ID 1000 အထိမှတ်ယူနိုင်ပါသည်။ စတိုင်ကျသေသပ်သော ဒီဇိုင်းရှိပြီး လက်ဗွေဖက်ချိန်မှာ 1.2 စက္ကန့် မျှသာကြာမြင့်ပါသည်။ ဘာသာစကားအနေဖြင့် အင်္ဂလိပ်နှင့်ထိုင်းဘာသာများကို အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ စက်အတွင်းရှိ မှတ်သားထားသောအချက်အလက်များအား USB Disk ဖြင့်လွယ်ကူစွာထုတ်ယူနိုင်ပါသည်။ သင့်ရုံးမှ ဝန်ထမ်းများရဲ့ ရုံးတက်/ရုံးဆင်းချိန်များကို တိကျစွာမှတ်သားပေးနိုင်သော Olympia အမှတ်တံဆိပ် Fingerprint Time Attendance ကိုဝယ်ယူလိုပါက BaganMart.com မှတဆင့်ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။
For Fingerprint Time Attendance
May I get the quotation for "Fingerprint Time Attendance" ?